I-Riverside 3 i-Cottage yokulala (kuMlambo i-Humber) - I-Airbnb
I-Riverside 3 i-Cottage yokulala (kuMlambo i-Humber)
Le ndawo intle yasemanzini ilungele ukuhlala kamnandi. Ifumaneka kuphela kwimizuzu engama-40 ukusuka eGros Morne National Park, kwaye yimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwindawo yokutyibilika e-Marble Mountain.
Le propathi ibekwe kuMlambo i-Humber enedokhi ekwabelwana ngayo ilungele imisebenzi yamanzi ehlotyeni kunye nokuhamba ngekhephu ebusika. Betha iindlela ezilungiswe yi-NL kwimizuzu nje emi-5 ukusuka kwiyadi yethu!
Sihamba ngemizuzu esi-7 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye negrosari / ivenkile elula kumgama wokuhamba wepropathi.
Indlu ecocekileyo nepholileyo ngasemlanjeni enamagumbi okulala ama-3, ibhedi e-1 ephindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 zokumkanikazi ezilala zizonke iindwendwe ezi-6! Le ndlu inendawo yokuhlala ephambili enembono entle ejonge phezu komlambo, kunye negumbi lokuhlala lesibini elilungele iimfuno zakho zokuzonwabisa ezifana neBell fiber optic high speed internet, iziteshi zeTV, Netflix, imidlalo yebhodi, kunye nendala. -yesikolo Super Nintendo!
Indawo engasemva inegumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala ene-BBQ kunye ne-patio. Kwiinyanga zasehlotyeni zizisa iithoyi zakho zamanzi! Eli zibuko lilungele ukuqubha, ukukhwela inqanawa kunye nokukhwela isikhephe ukubiza ezimbalwa. Kananjalo ungakonwabela ukuba nomlilo ngobusuku obuzolileyo kwiyadi enoxolo!
Le ndawo inkulu iyamangalisa kwiinyanga zasebusika ngokunjalo, indawo yayo ilungile kwixesha le-snowmobile njengoko umlambo onomkhenkce ukhokelela ngqo kwiindlela zomyeni we-NL!
Eli khaya likwindawo esekwe kakuhle enoxolo, kwaye ikufuphi kakhulu neHumber River Walking Trail, ibala lokudlala, idayimani yebaseball, ibala lebhola ekhatywayo, kunye nokufikelela elunxwemeni loluntu.
Siyavuya kakhulu ukwabelana ngeli khaya nondwendwe lwethu :)
45" HDTV ene-I-Roku, intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
"Idolophu yaseDeer Lake ibekwe ekudibaneni kohola wendlela iTrans-Canada kunye neViking Trail eNewfoundland kunye nonxweme olusentshona lwaseLabrador. IDeer Lake yindawo yaseGateway ebonelela ngokufikelela kwiNorthern Peninsula kunye neLabrador, ikhaya leLifa leMveli le-UNESCO lehlabathi. Iziza. I-Deer Lake ikwaliSango eliya empuma nakwintshona yeNewfoundland kwaye yi-Snowmobile Hub yaseNewfoundland"
I-Deer Lake ibonelela ngemisebenzi yolonwabo yasehlotyeni njengokuhamba kwiindledlana, ukutshisa ilanga kunye nokuphumla kunxweme oluhle lwesanti yedolophu, igalufa kwikhosi yeGalufa yaseHumbervalley, ukuloba iisalmon, kunye nokutyelela i-Newfoundland Insectarium.
Imisebenzi yasebusika ibandakanya ukuhambahamba ekhephini, ukutyibilika ekhephini okanye ukutyibiliza kwindawo enqumlayo kwibala legalufa okanye iindledlana zokuhamba, kunye nokuloba emkhenkceni. Kwakhona tyelela iDeer Lake Hodder Memorial Recreation Complex enedama lokuqubha, i-bowling alley, kunye ne-skating rink.
Lonke olu lwazi lunokufumaneka kwiphepha lasekhaya leDeer Lake NL http://deerlake.ca/
Iindwendwe ziya kunikwa imiyalelo ekubhukishweni kwesiqinisekiso :) Sikufutshane nepropathi kwaye siya kufumaneka lula ngokobuqu, ngefowuni, nge-imeyile, okanye ngokubhaliweyo.